အမှိုက်ပုံးပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် သန် ့ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တည်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အမှိုက်ပုံးပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် သန် ့ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တည်ရေး
အမှိုက်ပုံးပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် သန် ့ရှင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တည်ရေး
Posted by etone on Jun 26, 2012 in Community & Society, Critic | 58 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း ကိုယ့္ကိစၥ၊ ကိုယ္ရွင္း တတ္ပါေစ
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ 24-6-12က MRTV 4ရဲ့ မနက်ပိုင်းသတင်းတပုဒ်မှာ ပါတဲ့ သတင်းတပုဒ်က ကျွန်မကို အတွေးတွေပွားစေခဲ့ပါတယ် ။ကမာ္ဘအေးဘုရားလမ်းက အမှိုက်ပုံးပျောက်တဲ့ သတင်းပါ ။ ကြားခါစကတော့ ကိုးလို့ကန့်လန့်ကြီး ဘယ်နှာ့ အမှိုက်ပုံးပျောက်တဲ့အကြောင်း သတင်းထဲ ထည့်လွှင့်ရသလဲပေါ့ … ။ သတင်းကြော်ငြာသူလေးက .. မျက်နှာ ချိုချို နှာသံလေးနဲ့ ကြော်ငြာသွားတော့ ….. သူ ့မျက်နှာလေး လိုက်ငေးနေတာနဲ ့ပဲ သတင်းအစဆုံးဂဃနဏ မမှတ်မိပါဘူး … ။
ဒါကတော့ ကမ်းနားလမ်းပေါ်က အမှိုက်ပုံးပေါ့ … ည မှောင်မှောင်ထဲ မမြင်မစမ်းနဲ့ ရိုက်လာတာ …
ကျွန်မက မိုးလင်းမိုးချုပ်အလုပ်သွားပြန်လုပ်ရပေမယ့် …အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းပေါ်က … လမ်းထောင့်တစ်နေရာမှာ ဖိုက်ဘာအမှိုက်ပုံးအစိမ်းကြီးတပုံးရောက်နေတာကိုတော ဇွန်လ16ရက်နေ့လောက်ကတည်းက ညဘက်ကြီးပေမယ့် … သတိထားခဲ့မိပါတယ် … ။ ဓါတ်ပုံတောင် အမှောင်ထဲမှာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ် …. ။ ဘီးတပ်အမှိုက်ပုံးကြီးလာချပေးထားတာ … ဝမ်းသာစရာပေမယ့် … သယ်ရလွယ် ၊ တွန်း ရလွယ်တာကြောင့်လည်း .. ဘယ်တော့များမှ ဘယ်သူတွေ မသွားမလဲဆိုတဲ့ အတွေးဖြစ်မိတာအမှန်ပါ … ။ ဒီလို အတွေးမျိုးဖြစ်မိတဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင် ရှက်မိပါတယ် …. ။ မနက်ရုံးကားသွားစီးလျှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ညဘက်ပြန်လာလျှင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် … အမှိုက်ပုံးကြီးရှိသေးရဲ့လားလို့ ဖြတ်သွားတိုင်း လှမ်းကြည့်ရတာ … အလုပ်တစ်ခုလို ဖြစ်လာခဲ့တယ် …. ။ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းကအမှိုက်ပုံးကြီးကတော့ .. ယနေ့ထိရှိနေဆဲပါပဲ .. ကားလမ်း ဟိုဘက် ဒီဘက် တစ်ခါတစ်လေ ရွေ့နေတာမျိုးဖြစ်ပေမယ့် .. အဝေးကြီးတော့ မရွေ့ဘူးပဲ … ။ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမှာ ဖရဲသီးဒိုင်ဆိုင်တွေ အရင်ကဆို အရမ်းကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နိုင်လွန်းတယ် ။ ဖရဲသီးပုပ်တွေကို လမ်းထောင့်မှာ ပုံလိုပုံထား ၊ ပ စ်လို ပစ်ထားတဲ့အခါဆို လမ်းသွားလမ်းလာတွေအတွက် သိပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ အနံ့တွေကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ။ အခုလို အမှိုက်ပုံးကြီးလာထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ … လမ်းပေါ်မှာ … ဖရဲသီးပုပ်တွေကို မတွေ့ရတော့သလို ၊ ဖရဲသီးပုပ်နံ့လည်း မရတော့ပါဘူး ။ အမှိုက်ပုံးကြီးမှာလည်း နံပါတ်တွေ တပ်ထားတာ မြင်ခဲ့ရပါသေးတယ် ။ရှမ်းလမ်းမှတ်တိုင်က အမှိုက်ပုံးကတော့ … ဓါတ်တိုင်နဲ့ ပူးပြီး သံကြိုးချည်ထားတာ တွေ့ရလို့ သဘောကျမိသေးတယ် … ။
အမှိုက်ပုံးကြီးရှိနေတာ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စလို့ တွေးပြီး .. တို့နိုင်ငံမှာ တစတစ ပြုပြင်ရေးတွေ လုပ်နေတာ …ကောင်းလေးစွလို့တွေးမိတာ ဘယ်နှစ်ရက်မှ မကြာသေးဘူး … အခုလို နိုင်ငံကျော်မီဒီယာကနေ … အမှိုက်ပုံးပျောက်တဲ့ သတင်းပါလာပကောလား ….. ။ စည်ပင်သာယာက မြို့နယ် ၃၃ခုမှာ … အမှိုက်ပစ်ဖို့ အခက်ခဲ ရှိတဲ့နေရာတွေ ၊ အမှိုက်ပုံတွေနဲ့ ဝေးတဲ့ နေရာတွေအတွက် … အမှိုက်ပုံးတွေ ထားပေးတာပါတဲ့ … အမှိုက်ပုုံးထဲက အမှိုက်သိမ်းချိန်ကိုလည်း ညနေပိုင်းနဲ့ … မနက်ပိုင်းတွေ သူ့အချိန်နဲ့သူ အချိန်မှီသိမ်းဆည်းပါသတဲ့ …. ။ ပျောက်သွားတဲ့ အမှိုက်ပုံးရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ ..သုံးသိန်းကျော် (သတင်းကြော်ငြာသူက အတိကျပြောပါတယ် ကျွန်မက မမှတ်မိလို့ပါ ) ဖြစ်ပြီး …. ဇွန်လ 18 ရက်နေ့က ပျောက်သွားတာပါတဲ့လေ … ။ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်း ပျောက်ဆုံးတာဖြစ်တာကြောင့် ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားပါတဲ့အကြောင်း ကြားခဲ့မိပါတယ် …. ။
တယ်လည်း ဆိုးတဲ့ လူတွေပါပဲ …..လူတွေ စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့ လုပ်တတ်ကြလွန်းလို့ …. အလေ့ကျင့်လေးပျောက်အောင် အမှိုက်ပုံးလေးတွေ ချထားပေးပါတယ် … ထားတဲ့ အမှိုက်ပုံးအရည်ကျိုရောင်းဖို့ ဖျောင်တဲ့ လူကလည်း ရှိသေးတယ် … ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ မသိဘူး ဒီနိုင်ငံမှာ ဒီလို စိတ်ဓါတ်ရှိနေတာကိုက ရှက်ဖို့ အလွန်ကောင်းနေတာပါ … ။ သဂျီးပြောတဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး …. ဆိုတဲ့ အသွင်ပြင်တော့ .. ဆောင်နေပါပြီ ။ လမ်းသွားတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ကားစီးပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းပေါ်က လူတွေကို သတိထားကြည့်ခဲ့မိတယ် …. ။ လွယ်လွယ် အမှိုက်ပစ်တဲ့ အကျင့် စွဲကပ်နေကြတာ ….. ကလေးတွေတင်မကဘူး … အသက်ကြီး အရွယ်ကြီးတွေအထိ .. အရွယ်စုံ ဆိုဒ်စုံပါပဲ … ။ အများပိုင်လမ်းပေါ် အမှိုက်ချတာ .. ကျွန်မအိမ်ရှေ့ အမှိုက်ပစ်တာ မဟုတ်လို့ …. သွားတားပိုင်ခွင့်မရှိပေမယ့် … ဒီလို လုပ်ရပ်တွေကိုတော့ ရှံ ့ချရွ ံ့မုန်းမိပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမှိုက်ကို လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး … လမ်းပေါ်မှာ လက်လွတ်စပယ် ပစ်လိုက်တာကမှ ရှက်စရာဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိစေချင်တယ် …. ။ ဆန္ဒက ဆန္ဒပါပဲ … လမ်းပေါ်က အမှိုက်ပစ်တဲ့ လူတိုင်းကို လက်တို့ ပြီး သွားပြောလို့မှ မဖြစ်တာ ….. ကျွန်မရဲ့ ဆန္ဒတွေ .. အတွေးထဲမှာပဲ … ရစ်ဝဲနေခဲ့မိတော့တယ် ။
အရင်ကတော့ အမှိုက်ပစ်စရာ အမှိုက်ပုံးမရှိလို့ ပစ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေမျိုး အမှိုက်ပစ်တဲ့ လူတွေ ပြောခဲ့ကြတယ် ။ အခုတော့ရော .. အမ ှိုက်ပုံးတွေ ရှိနေပါလျှက် …. အမှိုက်သယ်ရမှာ ဂုဏ်ငယ်တယ်ထင်သလား ၊ ရှက်များ ရှက်နေကြသလားပဲ … လမ်းလည်ခေါင် အမှိုက်ချတဲ့ လူတွေ ဒုနဲ့ ဒေးရှိသေးတယ် ။ ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်နဲ့ အမှိုက်မပစ်ရဆိုတာမျိုး လုပ်လျှင် လည်း ခဏပဲ ရမယ် .. နောက်ပိုင်းခွေးမြီးကောက် ကျည်ထောက်စွပ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးတွေနဲ့ ပြန်ပစ်ကြဦးမယ် ။ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စ ၊ သူတို့ စိတ်ထဲ တကယ်စွဲပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှသာ …. အရာထင်လိမ့်မယ် ။
လမ်းသွားရင်း .. လူတိုင်း လူတိုင်း အမှိုက်ပစ်စရာ ကိစ္စကြုံရစမြဲပါ … ချွေးထွက်လို့ Tissue နဲ့ သုတ်လျှင်တောင် သုတ်ပြီးသား ဒီဟာက အမှိုက်ဖြစ်သွားသေးတာပဲလေ …. ။ကိုယ့်အမှိုက်လေး ကိုယ်သိမ်းဖို့ … သယ်ရလည်း လွယ် ပေါ့လည်း ပေါ့ပါးတဲ့ …recycle အိတ်ပါးလေးတွေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ် … ။ ကိုယ့်ဆီကအမှိုက် ကိုယ်တာဝန်ယူသင့်တာကြောင့် အမှိုက်ပုံးရှိတဲ့နေရာထိတော့ ..သွားပို့သင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား ။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာလည်း .. အတော်ခက်တယ် … သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းတွေ ၊ အမှိုက်သိမ်းတဲ့ လူတွေ ရှိနေပါလျှက် … ဖွတဲ့ လူက တစ်ထောင် ၊ သိမ်းတဲ့ လူက တစ်ယောက်ဆိုတော့ …ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်သိမ်းတဲ့ အလေ့ထမရှိလျှင် မြန်မာနိုင်ငံက ဒီအမှိုက်ကိစ္စ နောက်ကမာ္ဘထိတိုင် ကြုံနေဦးမလားပဲ … ။ တချို့သော မြို့နယ်တွေမှာတော့ … အမှိုက်သိမ်းတဲ့ လူက လူမြင်ကွင်းလောက်ပဲ …သိမ်းကြတာ ၊ လ ှဲကြတာမျိုးရှိပေမယ့် … ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမှိုက်တွေ သိမ်းဖို့ …. အမှိုက်သိမ်းသမားမှာပဲ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကိုယ့်မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ မေ့လျော့နေတတ်ကြတယ် ။
တစ်ချို့သောမြို့နယ်တွေမှာ အမှိုက်ပုံးလည်းမရှိ ၊ အမှိုက်လည်းပုံလို့ မရ ၊ အမှိုက်ကားနဲ့ လာတဲ့ စနစ်ကလည်း ရက်မမှန်တတ်တဲ့ အခါ .. အိမ်သုံးအမှိုက်တွေကြောင့် ခေါင်းခဲ ကြရပြန်တယ် …. ။ ဒီလိုအခြေနေမျိုးဆိုလျှင်တော့ …. စည်ပင်ရုံးကို စာပို့တာမျိုးဖြစ်ဖြစ် ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ဆုံပြီး .. မိမိတို့ရဲ့ အခက်ခဲကို ပြောဆိုညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ် ။ အမှိုက်သိမ်းခြင်းစနစ်ကျဖို့ … လိုအပ်တဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ် ..ဆွေးနွေးမှုတေ ွပြုလုပ်သင့်ပါတယ် … ။ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အထပ်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြားမှာ .. အမှိုက်လှည်းလေးတွေ တွန်းပြီး … အမှိုက်ဗျို့ .. အမှိုက်လို့ အော်နေတဲ့ … စီးပွားဖြစ်အမှိုက်သိမ်းသူတွေလည်း ရှိတယ် ….. ။ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း မများတဲ့ သူတို့လို အမှိုက်သိမ်းသူတွေဆီမှာလည်း အမှိုက်ပစ်လို ့ရပါတယ် … ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အမှိုက်ဖိုးတော့ ကိုယ်ပေးရတော့မှာပေါ့လေ … ။
အမှိုက်ပစ်တွန်းလှည်းနဲ့ စီးပွားဖြစ်လိုက်သိမ်းနေသူတွေထဲမှာ … အသက်ရွယ်စုံအပြင် ၊ ကလေးတွေပါ ပါနေတာ တွေ့ရပါတယ် … ။ အမှိုက်ဆိုတဲ့ အရာမျိုးက ဘယ်သူကမှ နှစ်လိုခြင်းမရှိပေမယ့် .. ဒီလိုအမှိုက်သိမ်းသူတွေကတော့ … သူများ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး မူးစေ့မတ်စေ့လောက်ပမာဏလေးကို တနဲ ့နဲ ့စုကာ သမ္မာအာဇီဝကျကျ ရှာစားနေတာ …. ပညာအဆင့်တန်း .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် …. စိတ်ဓါတ်လေးတွေအရ … လေးစားစိတ်ဖြစ်မိပါတယ် ။ အမှိုက်တွေထဲက ရောင်းလို့ ရတဲ့ကော်တွေ ၊ သံတွေပါလာလျှင်တော့ ….အမှိုက်ကောက်သူတွေအတွက် ဘောနပ်စ်ပေါ့လေ ။
တစ်ချို့သော လုပ်ငန်းတွေက အမှိုက်စွန့်ပစ်မှု စနစ်ကိုလည်း ပြုပြင်သင့်နေပါပြီ …. အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာတစ်ခု ထောက်ပြရလျှင်တော့ .. လမ်းဘေး ဈေးသည်ပါ …. ။ လမ်းဘေးဈေးရောင်းတာ အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး .. စည်ပင်ကို အခွန်ဆောင်ပြီး ၊ ဈေးကောက်ပေးပြီးရောင်းကြရတာ … သမ္မာအာဇီဝရှာစားကြတာမို့ ရှက်စရာမဟုတ်ပေမယ့် … ဆိုင်သိမ်းပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်တွေကို မျက်နှာလွဲဂဲပစ်လုပ်လုပ်သွားကြတာတော့ … အသိစိတ်ဓါတ်ခေါင်းပါးတယ်လို့ပဲ ဝေဖန်လိုက်ချင်ပါတယ် ။
မေလဆန်းလောက်က တရုတ်တန်းမှာ မုန့်ထွက်စားပြီး ဆူးလေကို ညကိုးနာရီခွဲလောက်မှ လမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့တယ် … ကုန်ဈေးတန်းနားက အဖြတ်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းက … ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုတောင် အားနာသလိုဖြစ်သွားခဲ့မိတယ် … ပလူပျံနေတဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်ခွံတွေ ၊ သစ်သီးတွေက စွန့် ထုတ်တဲ့ အပိုင်းတွေ ၊ တောင်းစုတ် ၊ ပလုံးစုတ်တွေ ၊ စက္ကူအပြဲ အပိုင်းစတွေနဲ့ …… အမလေးလေး ……. အရမ်းကို လှပတဲ့ မြို့လည်ခေါင်ရဲ့ ညဦးပိုင်း မြင်ကွင်းများလားလို့တောင် သရော်မိပါတယ် ။ မကြာသေးခင်အချိန်ပိုင်းလောက်က … ကျွန်မမြင်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ရောင်းသူတွေ ၊ ဝယ်သူတွေ စည်ကားခဲ့ပေမယ့် … အမှိုက်ကိစ္စကိုတော့ ဘယ်သူမှ အရေးတယူမရှိခဲ့တာ … ဝမ်းနည်းစရာပါပဲ ။ ဈေးသိမ်းတော့ ခြေကားယား လက်ကားယား အမှိုက်တွေပစ်ခဲ့ပြီး … တာဝန်မဲ့ခဲ့ကြတယ် … ။ အမှိုက်ပုံးမရှိလို့ မပစ်နိုင်လျှင်တောင် ဘေးမှာစုပုံပေးခဲ့ဖို့ … အလုပ်မအားကြတော့ဘူးထင်တယ် …. ။ လမ်းမပေါ်တက်ရောင်းတဲ့ တဆိုင်တည်းမဟုတ်ဘူးနော် … ဆိုင်တိုင်း နီးပါးထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ ။ ကောင်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကိုသာ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး မယူတတ်ကြတာ…. ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုးကတော့ အထူးတလည်တောင် ရှင်းပြစရာမလိုပဲ မျက်စိနဲ့ ကြည့်ရုံနဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ အတတ်မျိုးထဲပါဝင်တယ်ထင်ပါရဲ့ … ။ လမ်းမီးရောင်ကြား အမှိုက်တွေဖွေးနေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုလည်း ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် …. ။ ညဉ့်နက်ပိုင်းရောက်မှ စည်ပင်ကလူတွေ တံမြက်စည်းတွေကိုင်ပြီး .. လိုက်လှဲကြတာပါ ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း အမှိုက်ဖြစ်လွယ်တဲ့ ပြသနာ နောက်တစ်ခုလည်း ဥပမာပေးချင်ပါသေးတယ် … ပမ်းဖလက် လို့ခေါ်မလား ၊ ဖလိုင်ယာလို့ခေါ်မလား … လက်ကမ်းစာစောင်လေးတွေလေ …. ကမ်းချင်တဲ့ နေရာမှာကမ်းပြီး ပစ်တဲ့လူကလည်း ပစ်ချင်တာပစ်တော့ .. အဲ့ဒီကမ်းတဲ့နေရာမှာတင် … အမှိုက်တွေ ချက်ချင်း ပွသွားတော့တာပေါ့ … ။ အဲ့ဒီလို လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို … အိမ်အထိပါအောင် ယူသွားသူ အရေတွက်အတော်နည်းပါတယ် ။ လမ်းမှာပဲ ပြီးစလွယ်ပစ်ခဲ့ကြတာ မြင်ခဲ့ဖူးတယ် ။ တချို့သော ကြော်ငြာ စာရွက်တွေက စာရွက်အရောင်နဲ့ ဒီဇိုင်းကြည့်တာနဲ့တင် ဘာကြော်ငြာတာလဲ မှတ်မိလောက်အောင် .. အကြိမ်ကြိမ်ဝေဖူးခဲ့တာမို့ .. ကမ်းပေးလို့ အားနာပြီး လက်လှမ်းယူခဲ့ကြပေမယ့် .. မဖတ်ပဲ လမ်းမှာ ပစ်ခဲ့သူတွေများပါတယ် ။ စီးပွားရေးသမားတွေ ၊ ကျူရှင်ဆရာတွေ အကျိုးမြတ်အတွက် လက်ကမ်းစာစောင်ထုတ်ပြီး ကြော်ငြာတာ အပြစ်မဆိုရက်ပါဘူး … ဒါ့သူ့ကိစ္စပါ … ဒါပေမယ့် … ကြော်ငြာစာစောင်ကမ်းမဲ့ နေရာနဲ့မနီးမဝေးမှာ .. အမှိုက်ပုံးလေးတော့ပြန်ထားပေးသင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။ ကြော်ငြာစာသားမှာလည်း ၊ ကိုယ့်စီးပွားရေးကြော်ငြာအပြင် ဒီအမှိုက်ကို အမှိုက်ပုံးထဲပစ်ဖို့ သင်္ကေတလေးလိုမျိုး ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ပါဆိုတာမျိုး စာရေးဖော်ပြသင့်ပါတယ် ။ စည်ပင်အနေနဲ့ကလည်း…… အခုလို လမ်းမပေါ်တက်ပြီးအမှိုက်ဖွနေသူတွေကို … ထိရောက်တဲ့ သတိပေးမှုမျိုး လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ။ လမ်းပေါ်မှာ ကြော်ငြာလက်ကမ်းစာစောင်ဝေတာ … လှုံ့ဆော်စာဝေတာလည်း မဟုတ် ၊ ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို သွေးထိုးတာလည်း မဟုတ်ပေမယ့် …. အမှိုက်ဖြစ်စေချင်းကို များစွာအားပေးတာကြောင့် … စည်ပင်ရဲ ့ခွင့်ပြုချက်မပါပဲ လက်ကမ်းစာစောင်ဝေခြင်းမျိုးကို ထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ် ။ လွယ်တာကို ခက်အောင် လုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး …. မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက် လက်ကမ်းစာစောင်ဝေလျှင် စည်ပင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး အကူညီရယူကာ ၊ ဝေတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ် .. ဒါမှသာ … လက်ကမ်းစာစောင်ဝေနေတဲ့ ဧရိယာ တလျှောက် … အမှိုက်သိမ်းစနစ်ကို စည်ပင်က ကူညီနိုင်မှာပါ …။
ကျွန်မတို့တွေက လူသားတွေပါ … လူတွေမှာ ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်စွမ်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ် … လူသားတွေချင်းတူပါလျှက် .. အနောက်နိုင်ငံ ၊ အရှေ့နိုင်ငံတွေမှာ စည်းကမ်း လိုက်နာတဲ့ အလေ့ကျင့် ရှိကြပြီး … ဘာလို့ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ လူအချို့မှာတော့… မျက်နှာလွှဲဂဲပစ်စိတ်ဓါတ်တွေ ရောနှောနေရပါသလဲ …. ။ လမ်းပေါ်မှာ အညစ်ကြေးစွန့်တတ်တာ … တိရိစာ္ဆန်တို ့ရဲ့ စရိုက်ပါ ….. ဒီလို အကျင့်မျိုးတွေ တစ်ယောက်ကနေ တစ်ယောက်ကူးနေလျှင် ဘယ်တော့များမှ သန့်ရှင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ရနိုင်ပါတော့မလဲ …. ။ မိမိနဲ့ မိမိပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းဖို့ လူသားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါကြောင်း ….. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ အရင်ဆုံး သတိပေးမိပါတော့တယ် …. ။
ရွာသူရွာသားများနဲ့ စာဖတ်သူအားလုံးပဲ …… သပ်ရပ်ပြီး သန့်ရှင်းစွာနဲ့ အမှိုက်ကင်းစင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ။ ။
thumbs up! လုပ်သွားပါတယ် မမအိတုံရေ ..
မြန်မာတွေက.. ဘယ်နေရာ..ဘယ်နိုင်ငံ..ဘယ်စနစ်ရောက်ရောက်.. မြန်မာပါပဲ..
အယ်လ်အေမှာလည်း.. သင်္ကြန်ပွဲလုပ်တိုင်း.. အမှိုက်နဲ့ချည်းပြဿနာဖြစ်ပြီး.. လုပ်တဲ့ပန်းခြံတွေက.. အနှင်ခံရတာလည်း.. မြန်မာတွေပါပဲ..
ပန်းခြံကို..တနှစ်ငှားပြီး..နောက်နှစ်..မြန်မာတွေဆို.. မလာကြပါနဲ့..အပြောခံရတာလည်း.. မြန်မာတွေပါပဲ..။
အသင်းအဖွဲ့..တခုခုက.. ငွေအကုန်ခံ..အိပ်စိုက်ပြီး.. မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါတယ်..
အယ်လ်အေမှာက.. ပန်းခြံငှားရင်.. ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးစီမှာ.. ငွေပေးငှားရတာပါ..
အဲဒီငွေကိုစိုက်.. ပွဲကလေးလုပ်.. လူတွေပိုပျော်ရအောင်.. ဈေးဆိုင်တန်းတွေဖွင့်ပေး..
ကိုရွှေမြန်မာများက.. စားပြီးသောက်ပြီး..စာကြွင်းစားကျန်.. အမှိုက်တွေဒီအတိုင်းချသွားတော်မူတယ်လေ..
ဘေးနားမှာအမှိုက်ပုံထားပေးထားလျှက်နဲ့.. ဒီအတိုင်း.. ခင်းပေးထားတဲ့ခုံတွေ.. ခုံအောက်တွေ.. မြက်ခင်းတွေမှာ..ချသွားတာခင်ဗျ…
ဦးဆောင်လုပ်တဲ့.. လူတွေခမျာ.. အိပ်စိုက်ငွေထုတ်ရ.. လုပ်အားစိုက်ရအပြင်.. ပွဲပြီးလို့.. တနေ့လုံးပင်ပန်းနေကြတဲ့ကြားထဲ.. အမှိုက်ပါလိုက်ကောက်ရတာ…
အနော်ရထာကစခဲ့တဲ့… နှစ်၁၀၀ဝ ကျိန်စာ…။
မကောင်းတဲ့စနစ်ထဲမှာနေခဲ့ရဘူးဒဲ့ လူဒွေဆိုဒေါ့ဂါ ဒီလောက်ဒေါ့ စိမှာပေါ့
ဒီနေရာမှာ လူကြောင့်စနစ်လား စနစ်ကြောင့်လူလား ပြောကြရင်တော့
ကြက်ဥနဲ့ ကြက်မ အစရှာသလို ကြက်ထီးခံစားရမဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဇေလိုဘာ
( စနစ်ကို ပုံသေမထားခဲ့ကြတာလေးပါ )
ဒဘင်လဲ ဒဘင်ထူ တလင်မကောင်းတလင်ပြောင်း ဆိုသလိုပေါ့ သဂျီးမင်းရယ်
အနှီးလူဒွေကို စနစ်သစ်တွေ ချမှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါကြောင်း
ဖလား … ဖလား … တူညားနိုင်ငံရောက်နေတာ်တောင် အဲ့လို ကိစ္စလည်း ရှိသေးသတဲ့လား … ။ လူတွေသာ အဆင့်မြင့်သွားတယ် .. စိတ်ဓါတ်တွေ အဆင့်လိုက်မမြင့်နိုင်သေးတာ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်သလိုပါပဲ ………. ဟွန်း … စိတ်မောတယ် …. ။
အမေစုပြောတယ်ကော။ နိုင်ငံခြားမှာနေတုန်းကပြောလေ့ရှိတဲ့စကားရှိတယ်တဲ့။ စည်းလုံးရင်မြန် မာမဟုတ်ဘူး။ မစည်းလုံးဘူးဆိုရင်အဲဒါမြန်မာပဲဆိုတာလေ။
လာပြန်ပြီ သဂျီးမင်း… အနော်ရထာကစခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာဆိုပဲ…
ဒီကိစ္စကိုဖြင့်တော့ ရွာထဲက သမိုင်းပညာရှင်တွေရှင်းမှဖြစ်မယ်… အနှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာဆိုပဲ…
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီလို စည်းကမ်းမရှိ ကားပေါ်က အမှုိုက်ပစ်၊ ကွမ်းထွေး လုပ်နေတာတွေမြင်တိုင်း ပြောချင်လိုက်တာ၊ ပြောလို.ကလဲ မဖြစ်။ လူတွေကလဲ တမျိုးဗျ၊ လုပ်လို. ရလို.လုပ်နေတဲ.ပုံစံ။ ဒီလူတွေပဲ လုပ်လို.မသင်.တော်တဲ.နေရာ (ဥပမာ-shopping mall တွေ၊ hotel တွေ) သွားရင် ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် နေတတ်ရဲ.သားနဲ.၊ တော်တော်တော.ခက်သား။
လုံးဝကို ဘာမှမသိတဲ. လူတန်းစားတွေကတော. တမျိုးပေါ.ဗျာ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေ အတွက်ကတော. အသိဉာဏ်ပေးဖို.ထက် သူတို.အတွက်ထိရောက်မယ်. စည်းကမ်းမျိုးတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချပေးမှ သင်.တော်မယ် ထင်ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံး ခိုးတာမျိုးဆိုရင် မိအောင်ဖမ်းပြီး ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူသင်.ပါတယ်။
တကယ်ဖမ်းချင်လျှင် တကယ် မိအောင် ဖမ်းလို့ ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.. အမှိုက်ပုံးကသေးသေးကွေးကွေးမဟုတ်ပဲ အကြီးကြီးဆိုတော့ ….
ဘယ်နေရာတွေက အဲ့လို ပစ္စည်းတွေ ပြန်ဝယ်ပြီး ကျိုလဲသိလျှင် … ဖမ်းမိနို်င်မယ် ထင်ပါတယ် … အမှိုက်ပုံးခိုးတာ .. တော်ရုံစိတ်နဲ့တော့ မရဘူး .. အရမ်းကို စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျမှ လုပ်လို ့ရမယ့် လုပ်ရပ်မျိုး … ။
ကွမ်းတံတွေးကိစ္စကတော့ တော်တော့်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွားပဲ…တစ်ခါသား ရုံးက အစ်မတစ်ယောက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတယ်…ကားပေါ်ကနေ ကွမ်းတံတွေးထွေးချလိုက်တာ သူ့ပေါ်တည့်တည့်ပဲမို့လို့ အိမ်ပြန်ပြီး အဝတ်အစားလဲနေရလို့တဲ့… သူတော့မသိဘူး..မွန်မွန်တော့ ကြားတာနဲ့တင် ပျို့တက်လာသလိုပဲ…
ိစိတ်ဓာတ်တွေကို ဘယ်က စပြင်ရမလဲ မသိတော့ပါဘူး…
ကိုယ်နဲ့ ကိုယ့် မိသားစုအပါဝင် နီးစပ်သူများကို
သန့်ရှင်း သပ်ရပ်စွာနဲ့ အမှိုက်ကင်းစင်တဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကို တချိန်မှာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်
အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းမှာ ဖရဲသီးဒိုင်ဆိုင်တွေ အရင်ကဆို အရမ်းကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ နိုင်လွန်းတယ် ။ ဖရဲသီးပုပ်တွေကို လမ်းထောင့်မှာ ပုံလိုပုံထား ၊ ပစ်လို ပစ်ထားတဲ့အခါဆို လမ်းသွားလမ်းလာတွေအတွက် သိပ်ဆိုးလွန်းတဲ့ အနံ့တွေကြောင့် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ။ အခုလို အမှိုက်ပုံးကြီးလာထားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ … လမ်းပေါ်မှာ … ဖရဲသီးပုပ်တွေကို မတွေ့ရတော့သလို ၊ ဖရဲသီးပုပ်နံ့လည်း မရတော့ပါဘူး ဆိုတော့ ဘယ်အညှိးနဲ့များ ပြောရင်လေသမား အီးပုံးရယ်
အဲဒါ စနစ်ကြောင့်မဟုတ် စနစ်ကြောင့်မဟုတ်……..
ဟဲ့ ဖြဲမ … ဖရဲသီး ကြားတိုင်း .. နင့်နာမည် ခေါ်တယ်ထင်နေသလားဟင် … ။
အသံထွက်ချင်းတူပေမယ့် …စာလုံးပေါင်းကွာတယ်ဟဲ့ .. နင်က ဖြဲမ … ပုပ်နေတာ .. ဖရဲမ …အဲဖရဲသီး ….
လောလောဆယ်ဒေါ့ ရွာထဲမှာ ဖရဲပုတ်နံ့ထွက်နေဘီ
ဟဲ့တောင်မဂျုတ် ရေရောချိုးရဲ့လား :grin:
ပြေးဘီနော် ဘိုင့်…. ဝှီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
အမှိုက်ပုံး တောင် ပျောက် တဲ့ တို့တိုင်းပြည် ပါလား။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမှိုက် ပုံးကြိုးချည် ထားတဲ့နိုင် ငံအဖြစ် ထူးထူးခြားခြားပေါ့။
ကောင်းတယ် ဒေါ်လေး—- အီတုန်းရေ။
ကျုပ်လည်းအဲဒါရေးနေတာ၊ခုတော့ မမဂဦးသွါး…. ဝူးထွါးထွါးဗျား။
ကျန်းမာရေးအရရော၊မြို့တော်အင်္ဂါရပ်အရရောဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စမို့အားလုံးအလေးထားပြီးစည်ပင်ကိုကူညီ လိုက်နာသင့်ပါတယ်၊အမှိုက်ခွဲခြားစွန့်စေတာကအစ၊နောက်ပိုင်းမှာအဲသည်အမှိုက်ကနေ လောင်စာစွမ်း အင်ထုတ်ဘို့ထိအစီအစဉ်တွေရှိနေပါပြီ၊ဘယ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့စံနစ်ကိုချ မှတ်ပေးတယ်မှန်ရင် ကိုယ်အပါအဝင်အများအကျိုး၊နိုင်ငံအကျိုးအတွက်လိုက်နာဆောင် ရွက်သင့် ့ကြောင်း ပါ။
( ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကလေးမှပြည်သူတွေလိုက်နာသင့်တာကလေးတွေကို
မေတ္တာရပ်ခံ အသိပေးတဲ့စာကလေးတွေဝေငှပါသဗျာ )
အဲ့သည်လို လက်ကမ်းစာစောင်တွေဘာတွေဝေငှတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့
လူအချို့ဟာ အခြေခံကျတဲ့ အကြောင်းအရာအချို့ကို လုံးဝမသိပါဘူး
အဲ့သည်လို အခြေခံကျတဲ့ သဘောလေးတွေကို မသိလို့လုပ်မိတဲ့
ကိစ္စတွေကြောင့် ရရှိတဲ့ဆိုးကျိုးတွေများတယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ( အထင် )
မိမိဝေငှတဲ့စာစောင်ကို ဝေငှသင့်တယ်လို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲဆိုတာရယ်
ဒီလိုကိစ္စတွက် ဘယ်လို အဖွဲ့စည်းလေးတည်ဆောက်တယ် ဆိုတာရယ်
ကိုယ်က ဝေငှတဲ့အခါ လူတွေရဲ့ ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မှု့တွေကို ကြုံရသလဲဆိုတာရယ်
ဘဂျီးက ကိုယ့်နွားကိုယ်ကျောင်းတာဆိုတော့ မပြောသာပေမယ့်
အချို့ ကြတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဘကြီးနွားကျောင်းတဲ့အခါ
( ဒါမှ ဒဂယ့် ကြယ်ငါးတွေကိုကောက်ပစ်တာလို့ခေါ်သဗျို့
မသိတဲ့သူတွေကို ဒေါခွီးနေမယ့်အစား သိအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းက
ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ဘကြီးနွား ငှားကျောင်းသလို
ဟုတ်ပ အဲဒီသတင်းနားထောင်ပြီး စိတ်ထဲမှာတောင်ဒေါသဖြစ်မိသေးတယ်။ အမှိုက်ပုံးတောင် ခိုးတဲ့
သူခိုး ဖမ်းမိရင်နောင်ကျဉ်အောင် နောက်လူတွေလည်းဒီလိုလိုက်မလုပ်ကြရလေအောင် ပြစ်ဒဏ်များများ
အမှိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင် ရှားသောက်ရှိုင်ဒွေ၊ ဈေးရှိုင်ဒွေ၊ ရှူပါ မားကတ်တွေမှာ
အိတ်၊ပုလင်း၊ ဘူးခွံ ရှတဖြင့် အမှိုက်ဖြစ်ပေါ်ရှေသော ပစ်ရှည်းများကို ထားသိုရောင်းချခြင်း ရှနစ်ကို ဖျက်သိမ်းသင့်ပါတယ်..
ဥပမာ ( မှန်အောင်ရေးထားတယ်နော်) ။ ။ကွမ်းယာလာဝယ်ရင် လာဝယ်တဲ့လူဂို မိမိရှိုင်မှာ အတင့် ထားထားတဲ့ အမှိုက်ပုံထဲသို့ကွယ်းယာအိတ်၊ကွမ်းတံတွေး ကုန်အောင် ၊ထွေးခိုင်းစေပြီးမှ ထွက်ခွါခွင့် ပြုချင်းသော်လဂေါင်း ၊
ရီးထုတ် ၊ နေကြာရှိ၊ မုန် ့ဟင်းခါး၊ ပလာတာ၊ အီကြာကွေး၊ လဘက်ရည်၊ အသုပ်ရှုံ၊ ဘိန်းမုန် ့၊ကြံရည်၊ ဘီအီး၊ ရှတဖြင့် ရှားတောက်ကုန်များကိုလဲ ပါရှယ် ထုတ်မပေးပဲ မိမိရှိုင်ထဲမှာပဲ ကုန်ရှင်အောင် ခွံ ့ကျွေး၍ ဝန်ရှောင်မှုပြုခြင်းများဖြင့် လဂေါင်း
ရှားတောက်ရှိုင်များအနေဖြင့် လာဝယ်ရှားသူကိုလဲ အိတ်နှင့် ပါရှယ် ထည့်မပေးပဲ တစ်ဇိချင်းရှီ ၊ တစ်ငုံချင်းရှီ၊ တစ်လုပ်ချင်းရှီ..မိမိစေ့မှာ ကုန်အောင် ရှားတွားဇေခြင်းများဖြင့်သော် လဂေါင်း
အထက်ပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ပြုမှုရှောင်ရွက်ခြင်းအားများဖြင့် အမှိုက်စုပ်ပွရှေလိုသော အလားအလာများ အတော်အတန် ကင်းရှင် လွင့်ပျောက်သွားမည်မှာ မလွဲအေကန် မုချ အမှန်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ရှုရှီးတင်ပြလိုက်ရပေသည်။
ရန်ဂုန်မြို ့ဒေါ် ရှီပင်တာယာရေး ဒန်မတီ
(ကော်မတီက အရှင့်နိမ့်လို့ဒံမတီ ပြန်ဖွဲ ့ထားတာ)
တွေ့ပြီ မဟုတ်လား။ ဘပု နဲ့ မောင်ဗိုက်။
သူကြီး ရဲ့ စနစ် ကြီး ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
ကန်ကလေး တို့ ဝင်ချင်သလို ဝင် ထွက်ချင်သလို ထွက် လို့ ရတယ်နော်။
အပိုကြေး တော့ ထပ်ရမယ်မထင် နဲ့။ ;-)
စနစ်ကောင်း က လူဆိုး တွေကို ထိန်းထားတာ။
အဲဒါ စနစ်ကောင်း က ဘယ်လို ရသလဲ။
သူကြီး ဆိုတဲ့ လူကြီးက စတာ ကြောင့် မဟုတ်လား။
ဒီတော့ စနစ် ကောင်းဖို့ လူတွေက အရင် ကြိုးစား အားထုတ်ပြီး စနစ်ကောင်း အတွက် လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေ အရင် ကောင်းကြပါ ကွယ်တို့။
ဟင်း … ပြောရတာ မောတယ်။
မောရင် ပါးစပ်ပိတ်ထား။ 8-)
မြန်မာနိုင်ငံသည်.. . …………………………………ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အမှိုက်ပြစ်လျှင် ဖမ်းဆီးမည်။ ဖမ်းဆီးမှာ ကြောက်လို့ အမှိုက်မပြစ်တဲ့သူရှိနိုင်၏။
ဖမ်းဆီးမှာ မကြောက်သူသည် လစ်ရင်လစ်သလို ပစ်ကြဦးမည်ထင်၏၊။
ရပ်ကွက်အတွင်း အမှိုက်သန့်ရှင်းဆုံးရပ်ကွက်ကို ဆုချမည်။
ဆုမချသောအခါ.. ဆုမလိုချင်သောသူများ.. အမှိုက်ပြစ်ကြလိမ့်မည်။
ဒီလိုအမှိုက်ပစ်လို့ တော်… မတော်… သင့်….မသင့်… စသဖြင့် လူ့အသိမှာလက်ခံတဲ့အထိ အသိသွင်းသင့်သည်ထင်၏။ အခုရေသောက်ချင်မှ အခုရေတွင်းတူလို့ကတော့လဲ အဆင်ပြေမည်မဟုတ်။ ရေတွင်းတူးရင် ရေငတ်နေလို့ စိတ်လျှော့သွားနိုင်၏။
ကိုရင်ဇောက်ထိုး ကွန်မန့်က်ို ကွက်လပ်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်
…………………………………… = သောက်ကျင့်မကောင်း
ပညာပေး ရုပ်မြင်သံကြား ဇါတ်လမ်းတို
ဆရာဝန်တစ်ယောက် နဲ ့သူ ့ရည်းစားခပ်စွာစွာကောင်မလေး တစ်ယောက် လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်နေရင်း ၊ ကောင်မလေး က သူ ့လက်ထဲကနေ စားလို ့ကုန်သွားတဲ့ ဇီးယိုထုပ် ကို လမ်းဘေးပစ်လိုက်တယ် ။ ဆရာဝန် က တားပေမယ့် မမှီလိုက်ပါဘူး ။
အဲဒီအချိန်မှာ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေက ရောက်လာပြီး… ကောင်မလေး ကို စည်းကမ်းမရှိ အမှိုက်ပစ်လို ့ဆိုပြီး သူတို ့ကားပေါ်ဖမ်းခေါ်သွားတယ် ။ ဆရာဝန်လဲ လိုက်သွားရပါလေရော ။
ရုံးရောက်တော့ ဒဏ်ငွေမဆောင်ခင် ၊ ယနေ ့ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးပျက်စီးလာရခြင်းအကြောင်းတွေ ရိုက်ပြတဲ့ ဗီဒီယို ပညာပေး တွေ ပြတယ် ၊ မြို ့ပြတွေမှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ရင် ၊ မြောင်းတွေဘယ်လိုပိတ်မယ် ၊ မြို ့တော်အတွက် ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်သော အကြောင်းတွေ အစရှိသဖြင့်… အဲဒါတွေလဲ ပြလိုက်ရော ၊ ကောင်မလေးဟာ ဟီးဟီးနဲ ့အော်ငိုပြီး သူမှားခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်တယ် ။ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးပေါ့ ။ အဲ့ခါကြမှ သူ ့ဘဲ ဆရာဝန်နဲ ့ရုံးကလူကြီးတွေဟာ ဒါမှ နိုင်ငံသားကောင်းပီသသွားပြီ ၊ နိုင်ငံကြီးသားကောင်းဖြစ်ပြီ ဆိုပြီး ပြောရင်း နဲ ့..
ဇါတ်လမ်းကို သိမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဝတ္ထုဇါတ်ညွှန်း မောင်မောင်ပေ (အုန်းစားသည်)
ဒါဆိုရင်တော့ကား မင်းသားလဲရှိပြီးသား… မင်းသမီးကလဲ အိတုန်းကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်လိုက်တော့
ကဲပြောနေကြာတယ်လူစုခွဲပြီး အမှိုက်ပုံးရှာမယ် တွေ့တဲ့အိမ်မှာ တစ်မြို့လုံးကအမှိုက်တွေ ဖရဲပုပ်တွေ ဘဲဥပုပတွေသွားစွန့်မယ် မအီးတုံးသဘောတူလား အဆင်ပြေရင်လက်ခုပ်သံလေးကြားချင်ပါတယ်
မိုးဇက်လေးရေ … အမှိုက်ပုံးပျောက်တာ … ရှက်စရာတော့ကောင်းတာပေါ့လေ .. ဒါပေမယ့် .. တချို့ လူတွေ ငတ်လာလျှင် အရှက်ထက ်အသက်ကို ပိုပြီးဦးစားပေးကြတယ် …. ။
အန်တီအိရေ … ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က အစပြုမှပဲ ရမယ်ထင်တယ်နော် … ဒီလိုပဲ တဦးစ နှစ်ဦးစ ကြိုးစားပြီးဒီလို အလေ့ကျင့်လေးတွေ လုပ်လျှင် … အချိန်ကြာလာတာနဲ့ .. သန့်ရှင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ရမှာ မလွဲပါဘူး ။
အစ်မမိုချိုရေ … အမှိုက်ပုံးကြိုးချည်ထားရတာ မြင်လို့မကောင်းပေမယ့် …ပျောက်သွားတာထက်စာလျှင်တော့ ..ကြားကောင်းသေးတော့ပေါ့အစ်မရယ် … အဟီး …ပြောရလျှင် ရှက်လည်း မရှက်တတ်ကြဘူး … အမှိုက်ပုံးတောင် ဖြောင်တယ်ဆိုတော့ ….. အရမ်းကို ကြပ်တည်း လွန်းနေတာလား ၊ စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျလွန်းတာလား တစ်ခုခုပါပဲ … ။
ကိုဘကြီးရေ … အရင်ကထက်စာလျှင်တော့ .. အစိုးရဘက်ကနေ .. တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်လာတာ အလွန်ကောင်းတဲ့ အလကား အလာပါပဲ … ။ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တာကောင်းတယ် … အရမ်းကြီးပြောင်းလဲလိုက်လျှင်လည်း လူတွေရဲ့ အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့ .. အတော်လေး လုပ်ယူရမှာကြောင့် တစ တစ ပြောင်းလဲလာတာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာလို့ယူဆပါတယ် …ပြောင်းလဲ မှုတွေကြား အမြတ်ထုတ်သူတွေလည်း ပါချင်ပါနိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်…သူလုပ်တာ သူ့စေတနာပေါ့လေ …ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် .. ကိုယ်တွေဘက်ကလည်း တက်နိုင်သလောက်ပါဝင်အားဖြည့်သင့်ပါတယ် … ။ ကိုဘကြီးတို့ ရပ်ကွက်ထဲက လူငယ်တွေ စုပေါင်းပြီး … ဒီလိုကောင်းတဲ့ အလေ့ထလေးတွေ စလုပ်ကြတာ … အားကျ ချီးကျူးမိပါတယ် ။
အစ်မ မေဖလားဝါးရေ …သတင်းတွေက အစသာပေါ်ပြီး .. အဆုံးသတ်မပေါ်တာအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ် … အဆုံးသတ်မပေါ်ဘူးဆိုတာ တရားခံမတွေ့ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော် .. သတင်းနောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တက်မလာတာပါ … ။ အမှိုက်ပုံးပျောက်တာ ရပ်သိရွာသိတော့ဖြစ်ပြီး .. တရားခံဖမ်းမိတဲ့အခါလည်း … ရပ်သိရွာသိဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ … ။
ဗိုက်ကလေးရေ .. ဖတ်ပြီးရယ်လိုက်ရတာ .. ပါးစပ်တောင် စေ့လို့ မရတော့ဘူး ..တွေးလည်း တွေးတတ်ပါပေတယ် …ရေးလည်း ရေးတတ်ပါပေတယ် … ။
မမအညာသူရေ .. တစ်ဆယ်လည်း ယူပါ .. လမ်းပေါ်မှာ အမှိုက်ပစ်တာ ၊ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာ ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးလေးလည်း အဆစ်ယူသွားပါ
ကိုဇောက်ထိုးရေ … ရပ်ကွက်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ပြသနာကို ဟိုက်လိုက်လုပ်ပြလိုက်သလိုပါပဲ … ။ အမှိုက်ပစ်လျှင် ဖမ်းမယ်ဆိုလို့သာ မပစ်ကြတာ.. လစ်လျှင်တော့ ပစ်ကြတဲ့ အကျင့်က မပျောက်ပါဘူး ။ အမှိုက်ဆိုတာမျိုးကလည်း … ကြာရှည်သိမ်းထားလို့ ဈေးကောင်းရတဲ့ ပစ္စည်းမျိုးမှ မဟုတ်တော့ … အမှိုက်က အထုတ်အထည်နဲ့ ဖြစ်လာလျှင်ပဲ ပစ်ချင်နေကြပြီလေ … ။ ဖမ်းမယ် ..ဆီးမယ်လုပ်လည်း .. ခဏပဲ ရမှာ … ဖမ်းမယ့် ဆီးမယ့်စောင့်ကြည့်သူမရှိလျှင် ပြန်ပစ်ကြဦးမှာပါပဲ .. အကျင့်နဲ့ အတူ စိတ်ဓါတ်ကိုပါ မြင့်တင်ပေးသင့်တာပါ … ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ .. စနစ်ကျတဲ့ အမှိုက်သိမ်းစနစ်မျိုး ထားရှိပေးဖို့ လိုမယ် …ပြည်သူတွေဘက်ကလည်း ..ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ကျေတဲ့ အနေနဲ့ စနစ်တကျ အမှိုက်ပစ်တဲ့ အလေ့ထလေး ရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် …
ကိုပေရေ … ဇာတ်ညွှန်းရေးစားတော့မလားဟင် … ။ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ .. တီဗွီက ပညာပေး အစီစဉ်ကြည့်ခိုင်းတာတောင် ပါသေးတယ် .. ဟိ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောင်မလေး ဇီးထုတ်စားတဲ့ နေရာတော့ သိပ်သဘာဝမကျဘူး … ။ ဘေးကပါတဲ့ သူ့ရည်းစား ဆရာဝန်က .. ဇီးထုတ်ထဲ .. ဘာကောင်တွေပါတယ် ၊ ရက်စွဲက ဘာဖြစ်နေတယ်နဲ့ ကွိကွိ ကွကွတွေရစ်နေမှာကြောင့် … ဇီးထုတ်အစား … တခြား အထုတ် .. အဲ …. တခြား ဟာပြောင်းစားတာလေး ပြင်ရေးသင့်ပါတယ် … ဟိဟိ
ကိုဖိုးထောင် … က ဦးဆောင်ပြီး … လူစုလိုက်ပါ … အဟဲ …ခွေးလိုက်ဆွဲလျှင်တော့ တာဝန်မယူနော် ..
ဒီလို Post အတွက် စီဂျေ တုံတုံ ကို လှမ်းပြီး အလေးပြုလိုက်ပါသည်။
ကြည်မြင်တိုင် က အမှိုက်ပုံးကြီး ကို တကြည့်ကြည့် လုပ်လိုက်၊
ကင်မလာကြီး နဲ့ ချိန်လိုက် လုပ်နေတာ ကို မြင်ပြီး ပြုံးမိနေပါတယ်။
အဲဒီလို ရှားရှာပါးပါး သိသာထင်ရှား တဲ့ ဟာကြီး ကို မသွားပြီး ဘာလုပ်စားလို့ ရမလဲ ဆိုတာ တွေးနေမိတယ်။
နောက်ပြီး အဲဒီ ဟာကြီးက ၃သိန်းကျော်?
ဒါဆို ဒေါ်လှ လေးရာ နီးပါး။
အဲဒီလို ပုံး တွေ က အမှိုက် ဘယ်လောက်ဆန့် နိုင်ပါ့မလဲ။
နောက်ပြီး အဲဒီထဲက အမှိုက် တွေကို ထုတ်သယ်ဖို့ ပုံးတွေကို မလို့ ရတဲ့ အထူး အမှိုက်ကားလိုမှာ။
ဒီအတိုင်းချပြီး လာမသိမ်း ရင် အမှိုက်တွေ လျှံထွက် နေဦးမှာ။
ရေရှည် အသေအချာ မတွေးဘဲ စိတ်ကူးရရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဒါကောင်းတယ် ဝယ်ပါ ဆိုပြီး ကော်မရှင်ပေး ပစ္စည်းထိုးရောင်း တာတွေကြောင့် အသုံးမတဲ့ ဘဲ ဟန်ပြဖြစ်ပြီး အလဟသ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ငွေတွေ လဲ မနဲ တော့ဘူး။
စနစ် နဲ့ လူ ???
တစ်ချို့ က ပြောသေး အဲဒီမကောင်း တဲ့ စနစ်ကြီးက လူ တွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် ကို ဖျက် နေတာတဲ့။
ဟ ဟာ ဟား လို့ အော်ရီချင်တယ်။
အခုချိန်မှာတော့ အဲဒီလူ တွေ ရဲ့ မတော် လောဘ နဲ့ ငါမှငါ အစွဲ တွေ ကြောင့်ဘဲ စနစ်ဆိုတာကို အဖတ်မဆယ် နိုင်တာလို့လက်ညှိုးထိုး လိုက်တော့မယ်။
(အရီး – အရီး – ပါးစပ်ပိတ်ထား)
အမှိုက်ပုံးများ ခိုးခံရကြောင်း ရန်ကုန်စည်ပင်မှ သတင်းထုတ်ပြန် By The Voice Weekly
လွန်ခဲသော ငါးရက်ခန့်က ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင် နယ်နမိတ်အတွင်း အများပြည်သူ အမှိုက် စွန့်ပစ်ရန် ထားရှိသော အမှိုက်ပုံးအချို့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ခိုးယူခံနေကြောင်း ရန်ကုန် မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မီးဖိုချောင်ထွက် အမှိုက်များနှင့် စည်းကမ်းမဲ့ စွန့်ပစ်သော အမှိုက်များ လျော့နည်း သက်သာစေရန်နှင့် ပြည်သူများ စနစ်တကျဖြင့် သတ်မှတ် အမှိုက်ပုံးများတွင် လွယ်ကူစွာ စွန့်ပစ်ရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့အနှံ့တွင် ယင်းအမှိုက်ပုံးကြီး ၄၇ဝ လုံးအား မြို့နယ်အလိုက် ချထားပေးခဲ့ ပြီးနောက်ပိုင်း ဗဟန်း မြို့နယ် ကမ႓ာအေးဘုရား လမ်းဘေးတွင် ချထားသော ၆၆ဝ လီတာဆန့် တန်ဖိုးကြီး အမှိုက်ပုံးကြီး တစ်လုံး ပထမဆုံး အခိုးခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာန ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒီမှာ ၆၆ဝလီတာ ဘီးပါ အမှိုက်ပုံး ကို ပေါင် ၁၈ဝ ပေးရပါသည်။
မြန်မာငွေ နှစ်သိန်း သုံးသောင်း လောက်။
ဒါ တစ်ခုချင်းလက်လီ ဈေးနော်။
တရုတ်ဖြစ် သာဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ ပိုပြီးတောင် ပေါရဦးမယ်။
စာရွက်စာတမ်းကြေး က တစ်သိန်းကျပါတယ်ခင်ဗျ..
ဟဲ့ ရွာစား ပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း
ဒီပိုစ့် လေးကို ဖတ်ပြီး
ငယ်ငယ်က ဆရာမပြောခဲ့တာလေးကို အမှတ်ရမိပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦး အခြားနိုင်ငံကို ခရီးသွားသတဲ့
လမ်းမှာ ချိုချဉ် ဝေတော့ အမူးပြေ ယူစားပြီး အခွံလေးကို
အမှတ်တမဲ့ စွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ ခဏအကြာမှာတော့
ဘေးခုံက အခြားနိုင်ငံသား ကလေးလေးတစ်ယောက်က အဲဒီအခွင်ကို
ယူပြီး အမှိုက်ပုံးမှာ သွားထည့်ပါတယ်တဲ့
လူကြီးလဲ အဲဒီအခါမှ သူ့ကိုယ်သူ ရှက်မိသွားတော့တယ်တဲ့
ကျောင်းမှာတည်းက သွန်သင်ဘို့ အမှိုက်တင်မဟုတ်ပါဘူး
ကျုပ်အိမ်ရှေ့မှာ ညနေပိုင်းဆို ကျောင်းကပြန်ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေ စုပြီး
အဲ မနက်အစောကြီးထကြည့်လိုက်ရင် အိမ်ရှေ့မှာ အမှိုက်တွေ
ဒါကြောင့်ကိုး…. FB ကာတွန်းတစ်ကွက်မှာတွေ့ရတယ် အမှိုက်ပုံးပေါ် စီစီတီဗီ နဲ့…။
ဒီနိုင်ငံမှာ ရီဆိုင်ကယ်က အကျင် ့ပါနေပြီဆိုတော ့ဒီလိုဘဲ ခိုးကြဦးမှာပဲ။
အမှိုက်ပုံးဓါတ်ပုံရဖို့ … ရိုက်ရတာ .. ရယ်တော့ ရယ်ရတယ် ..အဲ့ညက လမ်းမီးမလင်းတလင်းနဲ့ …မှောင်ကလည်းမှောင်ပြီး ..ဖုန်းကင်မရာနဲ့ ရိုက်တာဆိုတော့ … အလင်းက ဒီလော်ကြီးထည့်လို့မရဘူး… ပုံပါအောင်တော့ရိုက်မယ် ..ပြီးမှ ကွန်ပျူတာထဲ နည်းနည်း ညှိမယ်ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ .. ဟီး ဒီလို ထင်သာမြင်သာရှိတာကြီးကို မသွားတယ်ဆိုတာကတော့ … နီးစပ်ရာကပဲ ဖြစ်မှာပါ အရီးရေ … အမှိုက်ပုံးကတော့ ချတဲ့ အနေထားပေါ်မူတည်ပြီး အကြီးသေးကွာခြားပါတယ် … အကြီးဆုံးပုံးကြီးတွေ့ဖူးတာတောင် … သုံးသိန်းလောက်တော့ တန်မယ် မထင်တာ အမှန်ပါ … ။ ဒီပုံးလောက်အနေထားကတော့ … ဆံ့တယ် အရီးရဲ့ … တရပ်ကွက်စာတနေ့တာ အမှိုက်လောက်တော့ ဆံ့တယ် .. ။ အမှိုက်သိမ်းတာလည်း မနက်အစောပိုင်းနဲ့ ညဉ့်နက်ချိန်ဆိုတော့.. အရင်ကထက်စာလျှင် စနစ်ကျလာပြီ ထင်တာပါပဲ … ။
မမနိုရာရေ …. ပုံပြင်ထဲမှာတောင် သူများ နိုင်ငံကလူတွေ စဉ်းကမ်း ဦးစားပေးအလေထားကြပါလားနော် … ။ အခြေခံငယ်သေးတဲ့အရွယ်ကတည်းက သင်ယူခဲ့တာမျိုးဖြစ်မယ် … ။
ဦးမိုက်ထောက်ပြတာလည်း ဟုတ်ပါတယ် … သမီးတို့ နိုင်ငံမှာ …အစိုးရကျောင်းပေါ့နော် … အဲ့ဒါတွေမှာ ကလေးတွေကို အမှိုက်ကောက်တဲ့ အလေ့ထ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် … အမှိုက်ကောက်ချိန်မှာပဲ … အမှိုက်မပစ်ရဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုး ကလေးအတော်များများ မှာ ကိန်း ဝပ်ခဲ့သလို .. ပစ်ပြီးသားအမှိုက်ကို တာဝန်ကျတဲ့ လူတွေက လိုက်ကောက်ရတယ် … ကိုယ်ဖွလည်း သူကောက်မယ်ဆိုတာမျိုး …ခေါင်းထဲ စွဲနေပုံရတယ် …. ။ ညီမဝမ်းကွဲလေးတွေ …နွေကျောင်းပိတ်ရက်မှာ …အပြင်ကျောင်း ခဏထားပါတယ် … ။ အချိန်ပိုင်းသဘောမျိုးပေါ့ ..အ ဲ့ဒီမှာက ပိုက်ဆံပဲ ပိုပေးရလို့လား …. နိုင်ငံခြားသားလုပ်ငန်းရှင်တွေ ပါဝင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းမို့လို့လား .. သင်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေ စနစ်ကျလို့လား မသိဘူး .. ကလေးက အမှိုက်ပစ်တာတောင် သေချာ ပစ်တတ်တဲ့ အလေ့ရလာတဲ့ အပြင် ၊ အရင်လို ဖိနပ်ကို တောင်တဖက် မြောက်တဖက် မချွတ်ထားတော့ဘူး … ။ ငယ်စဉ်အချိန်ကတည်းက … အလေ့ကျင့်ကောင်းလေးတွေ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်
Uncle Layပြောတဲ့ပုံ ဖေ့စ်ဘွခ်ထဲဝင်ရှာကြည့်ဦးမယ် …..ဟိဟိ .. အခုတောင် အမှိုက်ပုံးတန်ဖိုးက … သုံးသိန်း ဖြစ်နေတာ … စီစီတီဗွီများတပ်လိုက်လို့ကတော့ …..ဟိဟိ … မပြောတော့ဝူး .. မပြောတော့ဝူးးးးးးး
ကိုဆာမိရေ … စိတ်ဓါတ်တွေပါ … ရီဆိုက်ကယ်လုပ်နေသလား မှတ်ရတယ်နော် … ။ အစွန်းချွတ်ဆေး တပုလင်းလောက်သောက်မှ … အစွဲတွေ ကျွတ်မယ် ထင်ပါရဲ့
ဒေါ်အိတုံ ဒီပို့စ် လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်
လိုင်းကားပေါ်က ကိုယ်ပိုင်ကားကောင်းကြီးတွေပေါ်က လမ်းလျှောက်တဲ့ သူတွေက အမှိုက်တွေ ပစ်ချင်သလိုပစ် ကွမ်းတံတွေး ထွေးချင်သလို ထွေး နေကြတာ ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲ ကျလိကျလိ ဖြစ်နေရတာ ကြာနေပြီ
ရွာထဲမှာ အမှိုက်ကို စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရေးကြပေမဲ့ နဲနဲတော့ ကျဲပါတယ် လူတိုင်း သတိထားမိလာအောင် များများရေးကြရင် ကောင်းမယ်
အမှိုက်ပစ်တာ စနစ်ကျဘို့ စနစ်ရော လူပါ ပြင်ဘို့လိုမှာပဲ
ရေတိုအတွက် ကတော့ အမှိုက် စနစ်တကျ မပစ်ရင် အရေးယူမဲ့ ဥပဒေ တိတိကျကျထုတ်
စနစ်တကျ စောင့်ကြည့် စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်တာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ
စည်းကမ်းမဲ့ တဲ့ လူတိုင်းကို အရေးယူ ( မည်သူမျှ ကင်းလွတ်ခွင့် မရ ) ၊ ဖြစ်တိုင်း အရေးယူ
ဒါဆို အချိန် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာ တော်တော်လေး လျော့သွားမယ်
နောက် ရေရှည်အတွက်ကတော့ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာ မှားတယ် ရှက်စရာကြီးလို့ စိတ်ထဲ စွဲသွားအောင် မိဘကရော ကျောင်းတွေကပါ သွန်သင်ပေးဘို့ လိုမယ် ( တကယ်တော့ အမှိုက်ပစ်တာ တစ်ခုထဲတောင် မဟုတ်ပါဘူး ပြည်သူ့နီတိ တွေကို မဖြစ်မနေ မိဘတွေ ၊ဆရာ/မ တွေ က စံနမှုနာပြ လုပ်ပြီး သင်ပေးရမှာ )
အခုတော့ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်လိုက်ပြီးရင်တောင် ရှက်ရကောင်းမှန်း မသိပဲ ၊ ကိုယ့် ရပိုင်ခွင့် တခုမို့ လုပ်ရိုး လုပ်စဉ် လုပ်တဲ့ မျက်နှာပေးတွေနဲ့ …
နောက် တချို့ ပြောတဲ့ မြန်မာမို့ စည်းကမ်းမဲ့တယ် ဘယ်ရောက် ရောက် စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်တာပဲ လို့ ပြောကြတာလဲ လက်မခံချင်ဘူး
စည်းကမ်း တကျ အမှိုက်ပစ်တတ်တဲ့ မြန်မာတွေလဲ ရှိကြပါတယ် အရေအတွက်အရ နည်းနေတာပဲ ဖြစ်မှာပါ (အရေအတွက် တိုးလာအောင် ဒီ ပို့စ် မျိုးက အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ)
မိဘ က သူကိုယ်တိုင် နားလည် လက်ခံပြီး စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ရတာကို ရှက်စရာလို့ မြင်ပြီး သားသမီးကို သေချာ သင်ကြားပေးထားရင် ကလေးငယ်တောင်မှ အကျင့် တစ်ခု လို ဖြစ်ပြီး အမှိုက်ကို သေချာ ပစ်ကြပါတယ်
နောက် အမှိုက်အကြောင်းပြောရင်း တွေးမိတာလေး တစ်ခုလဲ ပြောကြည့်ချင်ပါတယ်
မြို့ တမြို့မှာ အမှိုက်ရှုပ်တာ၊ လမ်းမကောင်းတာ စတဲ့ ကိစ္စတော်တော်များများက မြို့တော်ဝန်နဲ့ ပဲ ဆိုင်တာပါ ၊ ဒီကိစ္စတွေကို လုပ်နိုင်မဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ မြို့တော်ဝန်ကို အဲဒီမြို့မှာ နေတဲ့ လူ တွေက သူတို့ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်တာမျိုးပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ် မလုပ်နိုင်ရင် နောက်တယောက်ရွေးမယ်
( အခုတော့ တိုင်းဒေသကြီးအတွက် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်ထဲက တစ်ယောက်ကို ဝန်ကြီးချုပ်က
စည်ပင်ဝန်ကြီးနဲ့ မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ရွေးတယ် ၊ အဲဒီတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့ ပြည်သူကြိုက်ဘို့ မလိုဘူး ဝန်ကြီးချုပ်ကြိုက်ရင် ရပြီ)
အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းဘို့ ကြိုးစာရင် ဒီ အချက်ကို လဲ ပြောင်းစေချင်ပါကြောင်း……………
သတင်းစာထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် …
ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်းမှာ ၃ သိန်းခွဲတန် အမှိုက်ပုံး ၅၀ဝ တောင် ရှိသတဲ့ …
ဘယ်လောက်များကြီးလဲလို့ ကြည့်လိုက်တော့ သိပ်လဲမကြီးပါ … ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ၃ သိန်းခွဲ မတန်ပါ ..
စည်ပင်ဘတ်ဂျက်ကနေ လူကြီးတွေ အဆင့်ဆင့် ဘယ်လောက်တောင် အမြတ်ကြီးစားလိုက်ကြလဲဆိုတာကို မသိမသာဖော်ပြလိုက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်လို့ တွေးမိတယ် ..
အမှိုက်သိမ်းတဲ့ စနစ်ကတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေနေပြီ ထင်တာပဲ.. အမှိုက်ပစ်တဲ့သူတွေက စနစ်တကျ ပစ်ဖို့ပဲ လိုတော့ပါတယ်…ညဘက်ဆို တော်တော်လေး ညဉ့်နက်နေတဲ့အထိ စည်ပင်က အမှိုက်သိမ်းတဲ့သူတွေ ရှိနေပါတယ်…၁၂ နာရီလောက်အထိလည်း တံမြက်စည်းလှဲသံ ကြားနေရသေးတယ်…ဒီအချိန်ထိ အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုပြီး စိတ်တောင်မကောင်းဘူး…
ပြီးတော့ အပြင်က အမှိုက်သိမ်းတဲ့သူတွေဆို လှည်းနဲ့အပြည့် အမှိုက်တွေတင်ထားတာကို ခါးချည့်အောင် တွန်းနေကြတာ…
ဘာပဲပြောပြော စိတ်ဓာတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ စနစ်တကျသာ စွန့်ပစ်ကြရင် တော်တော်သန့်ရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်…
တစ်ခါမေမြို့သွားတုန်းကပေါ့ .. ပွဲကောက်ရေတံခွန်မှာ
ကျောင်းတစ်ကျောင်းက Field Trip ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဆုံတယ် ..
အဲမှာ နိုင်ငံခြားသားလို့ယူဆရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က လက်ထဲကိုင်လာတဲ့
popcorn ဗူးကြီးမှောက်ကျတယ် လမ်းလည်ကောင်မှာ
သူတို့အဖွဲ့ထဲက ဆရာမတစ်ယောက်က လှည့်ကြည့်ပြီး အင်္ဂလိပ်လို
ကလေးကလည်း လမ်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ ပေါက်ပေါက်တွေနဲ့ဗူးခွံကို တစ်ချက်ကြည့်ပြီးလှည့်ထွက်မယ်အလုပ်
မိုးစက်က “ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီအမှိုက်တွေကို ကောက်ပြီး အမှိုက်ပုံးထဲထည့်လိုက်ပါ” လို့ပြောပစ်လိုက်တယ်
လမ်းဘေးက သစ်ပင်အောက်မှာအမှိုက်ခြင်းရှိတယ်လေ (ပုံးတော့မဟုတ်ပါ)
ကလေးက သူ့အမှိုက်သူ ကောက်ပြီးသွားထည့်လိုက်ပါတယ်
ပြောရမယ်ဆိုရင်မမအိတုံရေ သဂျီးလေသံနဲ့ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်
အဖွဲ့အစည်းဆိုတာမှာ ပြည်သူ့အတွက်၊ပြည်သူ့ဘက်မှရပ်တည်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်၊အဲသည်ထဲမှပြည်သူ့အတွက်အကျိုးပြုလှုပ်ရှားမှုတွေဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေတာတွေမယ်အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်၊အကြံပြုလို့ရပါတယ်၊ပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်။အဲသည်အထဲမှာပဲသင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းအရ တရား ဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အသင်းအဖွဲ့၊စာစောင်ထုတ်စေခွင့်ရှိတဲ့အသင်း အဖွဲ့ဆို တာတွေနဲ့ ချိတ် ဆက်ပြီးပြည်သူ့ထံအ ကျိုးပြုစာစောင်လေးတွေဝေငှလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ— မီးပျက်တဲ့အခါမောင်း လက် စမော်တာ၊ ထ္မင်း/ဟင်းအိုးတည်နေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးခလုတ်တွေပိတ်ဘို့၊မပိတ်လျှင်ဖြစ်ရတတ်တဲ့ဝါယာရှော့ အန္တ ရာယ်တွေအကြောင်း။
အပေါ်ထပ်မှအောက်ထပ်ကိုအမှိုက်ပစ်ချလို့ဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေ– စသည်ဖြင့်ပေါ့ ။
သည်အပေါ်မှာလူတွေတုန့်ပြန်မှုဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့်တော့ချက်ခြင်းမမျှော်လင့်ပါဘူး၊ တစ်ဖက်မှဝိုင်း အသိပေး၊ ပညာပေးပြီး၊ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်ကို အစိုးရဘက်မှပြည့်စုံအောင် လုပ်ပေးလာတဲ့ အချိန်နှင့် စည်းကမ်းဥပဒေတွေ အကျုံးဝင်လာတဲ့အခါ၊တစ်ထပ်ထည်း ကျပြီးသားဖြစ်မယ်လို ့မျှော်လင့်ပြီးလုပ် ရ တာ ပါပဲ။ယုတ်စွအဆုံး ရာအိမ်မှုးဆိုတဲ့သူကိုစည်းရုံးထားနိုင်ရင်တောင်၊ မီးပျက်တာနဲ့ခလုတ်တွေပိတ် ဘို့ သူက အာ်လံနှင့်သတိပေးတာလက်တွေ့ပါဗျား။ကျနော်လည်းလက်ရှိမှာ ကိုယ့်ထ္မင်းကိုယ်စားနေသော ဝမ်ထမ်းတစ်ယောက်ပါဗျား။တစ်ခုတော့ရှိတယ်ရပ်ရေးရွာရေးမှအစ၊သာရေးနာရေး၊ဘာသာရေးအသင်းဖွဲ ့တွေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်စေတနာကို လူတွေအသိမှတ်ပြုထားလျှင်တောင် ကိုယ့်အကြံပြုချက်
တွေကိုအလေးထားပေးကြပါလိပ်မယ်ဗျား။ ဒါ့ကြောင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုအဖွဲ့တွေမှာလက်ရှိလုပ်နေသူတွေ
စရိုက်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပေမည့်၊ဥပေက္ခာမပြုပဲလူကောင်းတွေများများဝင်ပါပြီး၊ကောင်းတဲ့ အဖွဲ့အ စည်းဖြစ်အောင်ပြောင်း ယူရမှာပါပဲ။
ဆိုခြင်တာက သူသူငါငါ တွေပေါ့နော ( အားလုံးသိမ်းကြုံးလိုက်ဘာဒယ် )
ဥပမာ ဒီကိစ္စလေးကို ဒီနေရာမှာပြောဆိုနေကြတာဟာဆိုရင် ကောင်းပါတယ်
သို့သော် ဒီနေရာမှာဘဲ သက်ဝင်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဆိုရမလား
လူတိုင်းစည်းကမ်းမရှိတာဟာ လူတိုင်းကိုသိစေနိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့ ( စနစ် ) မရှိလို့ပါ
ကျုပ်ကတော့ သူလိုကိုယ်လို ဝါးတားတား သတ္တဝါတစ်ကောင်ပါဘဲ
တစ်ခါတစ်လေ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနှင့် သိသင့်သိထိုက်တယ်ဆိုတဲ့
သဘောအချက်အလက်တွေကို သိရှိလာပြီဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အချိုးချကြည့်ပါတယ်
ဆိုလိုတာက ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို စနည်းနာကြည့်ပါတယ်
အဲ့သည်ခါ ဒီလူတွေကို ဘယ်လို သိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သဘောလေးကို
သေခြာတာကတော့ အပြစ်ပြောနေလို့ ဘာမှထူးမည်မဟုတ်တဲ့အတွက်
မိမိတတ်နိုင်သော အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကို စာစောင်တွေဝေငှတာဟာ
မအိတုန်ရေ ……. မနေ့ကရုံးမတက်တော့ မအိတုန်ပို့စ်လေးကို အတော်နောက်ကျမှ မန့်ရတော့မယ် သူများတွေမန့်တာတော့ မဖတ်ဖြစ်တော့ဘူးရှင် မနေ့ကရုံးမတက် ရွာထဲမဝင်ဖြစ်ဘူး အပြင်သွားတော့ လိုင်းကားစီးရင်း တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လူကြီးတစ်ယောက်က ကားပေါ်မှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပြောနေတာ လေးကြားခဲ့တာ မအိတုန်ရဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်တဲ့ပို့စ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ ဝင်မန့်မယ်ရှင် အဲလူကြီးကပြေနေတာက မြန်မာပြည်ကလူတွေကို စည်းကမ်းရှိအောင်တော်တော်လုပ်ယူရမယ်တဲ့ အမေစုလည်းကောင်းအောင်လုပ်ပေမယ့် ဒီလူတွေရဲ့စရိုက်ကို ပြင်ဖို့အတော်ကြိုးစားရမယ် တစ်ခြားမပြောနဲ့တဲ့ “ကျွန်တော့်သမီးကို မြန်မာ ပြည်မှာနေတာ အပြင်ထွက်ရင် သမီးမျဉ်းကြားကကူးနော်လို့ တစ်ခါမှမဆုံးမဖူးဘူးတဲ့ အခုသမီးလေးစင်ကာပူ သွားတော့ သူအရမ်းစိုးရိမ်ရတယ်တဲ့ သမီးလေးကို အမှိုက်စွန့်ပစ်တာကအစ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့မစွန့်ပစ်မိဖို့ အထပ်ထပ်မှာနေရတယ် သမီးရေ အမှိုက်ကိုနေရာတကာမစွန့်နဲ့နော် တစ်ခါစွန့်ရင်ဒဏ်ရိုက်မယ် နောက်တစ်ခါဆို ကြိမ်ဒဏ်ပေးလိမ့်မယ့်သမီး သူတို့နိုင်ငံကရဲတွေက မြန်မာနိုင်ငံကလို လာဘ်ထိုးလို့မရဘူး ယောက်ျားမိန်းမလည်းခွဲခြားမှာမဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံကရဲတွေဆို ကိုယ့်ကိုလာ အရေးယူရင်တောင် ငါးရာတစ်ထောင်ပေးလိုက်အိုကေ အဲဒါမှမအိုကေရင် ငါးထောင်လောက်ပေးလိုက်ရတယ် ဟိုမှာကလုံးဝမရဘူးလို့ ပြေထားရတယ်တဲ့” ထိုလူကြီးအသံက ကားတစ်စီးလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေလေရဲ့ သူပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုပဲ ကျွန်မမိဘတွေက မြို့ထဲသွားရင် ကားသတိထားကူးဖို့သာ သတိပေးတာ လူကူးမျဉ်းကြားကကူးဖို့ သတိပေးခဲပါတယ် ……
မအိတုန်ရေ အခုအမှိုက်ပုံးစိမ်းလေးတွေက လူတိုင်းပစ်လို့ရလားမရလားမသိဘူး အမှိုက်တွေကိုရော ပုပ်သိုးလွယ် မပုပ်သိုးလွယ် ခွဲခြားထားလား အပြည့်အစုံကိုမသိသေးဘူး ….. အခုလောလောဆယ်တော့ အမတို့တိုက်ကော်မတီဖွဲ့ထားတဲ့ အမှိုက်သိမ်းလှည်းနဲ့ပဲ တစ်လ ၅၀ဝပေးပစ်နေပါတယ် …..
စည်ပင်က စနစ်ရှိတယ် စည်းမရှိဘူး။
ခိုးတဲ့သူက သန် ့တုန်း လှတုန်း အမြန်ခိုးတာ။
ရန်ကုန်မြို ့လယ်ခေါင် ရွှေတိဂုံဘုရာလမ်း နဲ့ကမ်းနားလမ်း က
အမှိုက်ပုံးလို အဆင့်ရောက်ရင် မခိုးတော့ပါဘူး။
အဖုံးလည်းမရှိဘူး။အခုလို မိုးရာသီမှာ ရေတွေ နဲ ့အမှိုက် ကရောနေတာလေ။
အမှိုက်ပုံးမပြောနဲ့ ဒီမှာ ရောင်ပြန်ပြားသေးသေးလေးတွေကိုတောင် ကော်ထုတ်ပြီး ခိုးကြလို့ သတင်းစာထဲကနေ ကြေငြာပြီးကို လိုက်ဖမ်းရဖူူးတာပါ။
အမှိုက်ဆိုလို့ ဒီက ရှောပင်းစင်တာတွေနဲ့ဈေးတွေရဲ့ ကွာခြားချက်လေး မြင်မိသလောက်ပြောပြချင်တယ်။ စင်တာတွေမှာ ပြောပလောက်အောင် အမှိုက်ပစ်တာမျိုးမရှိပဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားဆိုင်ကယ် ထားတဲ့နေရာမှာတော့ ကွမ်းသွေးတွေ က တွေ့မရှောင်ပါ။ အမှိုက်ပုံးလေးတွေ ထားပေးနေတာတွေလည်း အရင်ထက်စာရင် နေရာ ပိုများလာတာတွေ့ပါတယ်။
အမှိုက်ပုံးထားပေးရင် ပုံးမှာသွားပစ်တတ်တဲ့ လူနည်းစုလည်း ရှိလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အမတို့ မန်းမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ အထင်ကရ ဈေးချိုတော်ကြီးရဲ့ ခန့်ညားလှတဲ့ ဓာတ်လှေကားတွေဟာ အမှိုက်သရိုက်တွေ ဗရဗွနဲ့ ညှပ်နေတာက သွားတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားပေါ် ထွေးချထားတဲ့ ကွမ်းသွေးတွေတောင် တွေ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဓာတ်လှေကားတစင်းဆိုတာပျက်တောင် နေပါပြီ။ အဲ့ဒီ ပျက်နေတဲ့ အထဲကို အားရပါးရ အမှိုက်တွေလည်း ပစ်ထားကြပါသေးတယ်။
အမှိုက်သိမ်းတဲ့သူကိုလည်း တွေ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိမ်းမနိုင်ပါ။ ဝန်ထမ်းနည်းတာလည်း တကြောင်းပါပါလိမ့်မယ်။
ယဉ်ကျေးလှတဲ့ ကိုယ်တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေပါ။ ဒါကဈေးကြီးနော် ။
ဈေးလျှောက်လမ်းကလည်း သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် လုခင်းကြလို့ တကိုယ်စာတောင် မနည်းဖြဲလျှောက်ရပါတယ်။ စည်ပင်က လာရင်လာတုန်းခဏပြန်သိမ်းပြီး လစ်တာနဲ့ ပြန်ခင်းချတာ အမြဲတမ်းပါ။
ရပ်ကွက်ဈေးကတော့ တုန်တုန်ပြောသလို ပါပဲ။ အတော် စိတ်ညစ်စရာကောင်းတာတွေ့ပါတယ်။ အရင်ကအတိုင်းပါပဲ။ ပစ်စလတ်ခတ်ပစ်ကြ နဲ့ပါ။
အဲ.. စည်ပင်က လူတွေကတော့ ဒီအမှိုက်ကိစ္စကို ဈေးတွေမှာ သိပ်အရေးတယူလုပ်တာကိုတော့ မတွေ့မိပါဘူး။
စည်ပင်တချို့ရဲ့ ရပ်ကွက်ဈေးတွေမှာ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ အကျင့်လေးတွေ ကြုံလို့ ဖောက်သယ်ချပါရစေ။
ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးဈေးသည်လေးတွေကို မထင်တဲ့နေ့ဆို တောင်းလိုက် ဗန်းလိုက်သိမ်းပြီး လိုက်ဖမ်းပါတယ်။ ခရာသံတရွှီရွှီနဲ့ တကယ့်လူဖမ်းပွဲကြီးပါ။ မရှိလို့ ရောင်းစားနေတဲ့သူတွေ ငိုကြယိုကြ ခြေသလုံးဖက်မတတ်ပါ။ နီးရာအိမ်တွေထဲ ဝင်ပြေးတဲ့ဈေးသည်တွေကို အိမ်တွေထဲထိ လိုက်ဖမ်းတာပါ။
ဒါကို အရသာခံပြီး မရှိဆင်းရဲသားတွေပေါ်မှာ လုပ်ရက်ကြတာကို မမြင်ချင်မှ အဆုံးပါ။ အဲ့ဒီဈေးသည်တွေက ဈေးကောက်ပေးပြီး နေရာမရှိလို့ ကြုံသလိုထွက်နေကြတဲ့ သူတွေပါ။
သူတို့ စည်းကမ်းဖောက်တာလည်း ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကျေနပ်တဲ့ နေ့တွေမှာ ဈေးကောက်ယူပြီး ပေးထွက်ပါတယ်။ မထင်တဲ့နေ့တွေ့မှာ ဒီလို ဖမ်းတာပါ။
သူတို့ အဲ့ဒီလို လုပ်မဲ့အစား အမှိုက်ကို စနစ်တကျ ပစ်တတ်အောင် မပစ်တဲ့သူတွေကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စည်းကမ်းလေး ထုတ်ပြီး အမှန်အကန်အရေးယူတာမျိုးလုပ်ရင် ရော ကိုယ့်စီးပွားထိခိုက်မှာ ကြောက်တဲ့သူတွေ လိုက်နာလာမယ်ထင်ပါတယ်။
အရိုးစွဲနေတဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုးကို တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ဒဏ်ငွေတွေနဲ့ စနစ်တကျမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရင် ထိရောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဈေးကြီးတွေက စကြည့်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တကယ်အမှန်အကန်လုပ်ပေးမဲ့သူ ဝန်ထမ်းတွေလည်း လိုတာပေါ့။
တပိုင်တနိုင် အမှိုက်လိုက်ကောက်တဲ့ အဖွဲ့လေးတွေ အပင်စိုက်တဲ့ အဖွဲ့လေးတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ဥိးပိန်မှာ အပတ်စဉ်အမှိုက်ကောက်တာ မန်းလေးတောင်ပေါ်ကောက်ပေးတာ စတဲ့ အဖွဲ့ လေးတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ စကားစပ်လို့ ပြောရရင် မန်းလေးတောင်ပေါ်အမှိုက်ကောက်တော့ တခြားသော အမှိုက်တွေနဲ့ အတူ အများဆုံး တွေ့ရတာကတော့ အသုံးပြုပြီးသား condon တွေပါ။ ဘုရားရိပ်ဆိုအေးမြတော့ ခိုကြတယ် ထင်ပါရဲ့။
စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ပစ်နေတဲ့ သူတွေလည်း လျော့မသွားသလို အမှိုက်ကို စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ ပစ်လာတတ်တဲ့ လူနည်းစုတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။
အမှိုက်ပုံး ရှိပါရဲ့နဲ့ အထဲဝင်အောင် မပစ်တာလဲ ကိုယ်တွေပါပဲ။ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့နေတာလည်း ကိုယ်တွေပါပဲ။
” ကောင်းမှုမြတ်နိုး ကောင်းအောင်ကြိုး၍ ကောင်းကြိုးကိုယ်၌ တည်စေမင်းပါပဲ။”
ခုလို တုန်တုန်ရေးပြတာကိုက ခုခေတ်လူငယ်တွေ ဒီလို အသိရှိနေတယ် ဆိုတာကို ပြတာပါ။ နောက်ဒါကို ကိုယ့်လို အသိရှိေအောင် မျှဝေပေးရမှာကလည်း ကိုယ်တွေရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။
တုန်တုန်လေး တာဝန်ကျေတယ်လို့ပဲ ပြောပါရစေ။
ဟုတ်ပါတယ် etone ရေ… ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။ မြန်မာပြည်သူားတွေ စည်းကမ်းရှိဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်။
အမကတော့ သွားရင်းလာရင်း အမှိုက်ကိုပစ်မချဘဲ ပါလာတဲ့ခြင်းတောင်း၊အိတ်ထဲကိုထည့်ထားတယ်။ အိမ်(သို့)ရုံးရောက်မှ အမှိုက်ခြင်းထဲထည့်တယ်။ တခါတလေတော့ ငါတစ်ယောက်တည်းစည်းကမ်းလိုက်နာ နေလို့လည်းမထူးပါဘူးလို့။ လူတိုင်းအဲလိုများတွေးနေကြလို့ဒီလို ဖြစ်နေတာလားလို့ တွေးမိပြီး အမရဲ့အတွေးကို အမပြန်ရှက်မိပါတယ်။
လူတိုင်းလူတိုင်းစည်းကမ်းရှိမှသာ တိုင်းပြည်သန့်ရှင်းလှပလာမှာပါ။ တော်တော်များများဟာ အသိတရားတွေ မရင့်ကျက်ကြသေးလို့ လို့ အမတော့ထင်တာပဲ။
အမှိုက်ပြစ်တယ်ဆိုတာက လူတွေကို့တန်ဖိုးကိုဖော်ပြနေတာပါ သူများနိုင်ငံမှာ
ဆို အမှိုက်ကိုမမြင်ရဘူးလေကို့နိုင်ငံကတော့ချခြင်နေရာချတာလေ ဒါစည်းကမ်း
တွေ့ကရာ ကြုံကရာ နေရာမှာ လူမြင်ကွင်းမှာ လမ်းမပေါ်မှာ အမှိုက်ပစ် တံတွေးထွေး စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ရနေသေးတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တာကတကြောင်း၊ စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဖူးလို့ ဘယ်လိုဘဲဆိုဆို အမှိုက်ကိတ်စ၊ တံတွေးထွေးခြင်းကိတ်စအတွက် အမှန်တကယ်ထိရောက်တဲ့ အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုစနစ်မရှိသေးတာလဲ တကြောင်း၊ အရိုးစွဲနေသော နိမ့်ကျတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ ကို တကယ်ကောင်းနဲ့စနစ် တကယ်သုံးပြီး ပြင်မပေးနိုင်သေးတာကတကြောင်း ပေါင်းလိုက်တော့ ၃ကြောင်းပေါ့ဗျာ
ကျမတို ့နိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေကစပြီးပြင်ယူရမယ် ့အရာတွေပေါ့။ တဖြေးဖြေးနဲ ့အရာအားလုံးဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါပြီ။
“ဒို့တိုင်းပြည်ကြီးဘယ်နေ့ တိုးတက်မလဲဆိုရင် လမ်းဘေးသောက်ရေအိုးစင်က ရေခွက်တွေကို ကြိုးမချည်ရတော့တဲ့နေ့” ပါတဲ့။
သဂျီးတို့ အမေဒစ်ကန်မှာ လူတွေကို Fine ချချင်ရင် လမ်းဘေးအမှိုက်ကောက်တာမျိုး social works တွေခိုင်းတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။မှန်မမှန်နဲ့နည်းစနစ်လေးသိချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရရင်တော့ နည်းနည်းသက်သာတယ်ဆိုလို့ ထောင်းပါရစေ။
ပန်းတနော်အလှူကအပြန် မြေနီကုန်းစုရပ်ကနေ အန်တီမမအိမ်အကြားမှာ စပယ်ယာလေး ၂ယောက်က သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ရွာသားတွေ ဘာပစ္စည်းတွေများကျန်ခဲ့ကြလေမလဲလို့ လိုက်ကြည့်တော့ ပွကျန်ခဲ့တဲ့ ရေသန့်ဘူးခွံ၊မုန့်အိတ်ခွံ၊တစ်ရှူးခွံတွေကိုတွေ့ရလို့ မျက်နှာပူပူနဲ့ စပယ်ယာလေးတွေကို ကူရှင်းပေးခဲ့ရပါကြောင်း။
(အမှိုက်ပစ်တဲ့ထဲ လိမ္မာတဲ့အမတ်မင်းတော့ပါပုံမရပါဘူး၊ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိမ်းလန်းစိုပြေမှာဆုံကြတုံးက စားကြသောက်ကြတဲ့ အမှိုက်တွေကို ကျမတို့လူကြီးတွေတောင် ထားခဲ့ကြတာ သူကလိုက်သိမ်းပြီးပစ်တယ်။မောင်မင်းမတ်ကို တစ်မှတ်ပေးပါတယ်။)
ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ ရွာသူသားတွေကို တစ်နေရာရာမှာ အမှိုက်ကောက်ခိုင်းချင်ပါတယ်။:D
မှန်ပါတယ်..။ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး လိင်လို ပါ.. အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့.. အမှိုက်ကောက်ခိုင်းတာလေ…
Lindsay Lohan’s Punishment: She’ll See Dead People
Monday April 25, 2011 02:30 PM EDT
The actress, 24, will be picking up trash, emptying trash bins, mopping floors and cleaning windows and restrooms at the L.A. County Department of Coroner’s facility.
“She’ll be doing basic janitorial work,” Coroner Assistant Chief Ed Winter tells PEOPLE. “She won’t be handling any dead bodies but she’ll certainly see them.
သူကြီးစကား ခဏငှားမန့်သွားပါတယ် ဗျာ။
မမအိရယ် မြို့လယ်ခေါင် လို့ပြောရမှာတောင် ရှက်ဖို့ကောင်းနေတုန်းပါဘဲ ရက်နေ့ထိလည်းသန့်ရှင်း ရေးအလုပ်သမားတွေ က စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပေးသွားတယ် အမှိုက် တွေ ရှင်းလင်းပေးသွားတယ် စည်းမရှိတဲ့ဈေးသည်တွေ ကားပေါ်ကနေ ညစ်ပတ်တာအကျင့်ပါနေတဲ့ခရီးသည်တွေ လုပ်ရက် ကြောင့်လှပတဲ့မြို့တော်ဆိုတာ ဘယ်တော့များမှ ဖြစ်လာပါ့မလဲလေ…..